माओबादी केन्द्रका नेता परे अपहरणमा: भारतीय प्रहरीले गरेको आशंका
काठमाडौँ । कपिलवस्तुमा नेकपा माओवादी केन्द्रका एक जना कार्यकर्ता सदरमुकाम तौलिहवाबाटै अपहरणमा परेका छन् ।
जिल्लाको कपिलवस्तु नगरपालिका–३ क्याम्पसटोलका स्थानीय माओबादी नेता सुशील तिवारीलाई भारतीय सुरक्षाकर्मीले पक्राऊ गरेको परिवारजनले बताएका छन्। तिवारी गत सोमबार दिउँसोतिर अपरहणमा परेका हुन्। तिवारी सोमबारको दिन दिउँसो घरबाट सदरमुकाम तौलिहवामा रहेको पार्टी कार्यालय जान भनेर हिडेको तर पार्टी कार्यालय पुगेपछि एकाएक सम्पर्कविहीन भएका हुन् । उनी सम्पर्कमा नाएपछि परिवारजनले प्रहरीमा खोजीका लागि उजुरी दर्ता गरेका छन्।
तिवारीकी पत्नी सिता तिवारीले अपहरणमा परेका आफ्ना पतिको जीवन रक्षाको लागि पहल गरिदिन आज पत्रकार सम्मेलनमार्फत सरकार, मानवअधिकारकर्मी र पत्रकारलाई समेत अपिल गरेकी छन्। अपहरणमा परेका तिवारीलाई भारतीय सुरक्षाकर्मीले पक्राउ गरी भारततर्फ लगेको हुन सक्ने उनका दाजु अनिल तिवारीले दाबी गरे । अपहरणमा परेका तिवारीमाथि भारतमा लागू औषधसम्बन्धी मुद्दा चलिरहेको बताईएको छ ।
अपहरणमा परेका तिवारीको खोजी कार्य भइरहे पनि हालसम्म कुनै जानकारी प्राप्त नभएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले बताएको छ ।
प्रकाशित : बिहिबार, चैत २९, २०७४१२:१६
आज नवरात्रिको अन्तिम दिन, यसरी मनाईन्छ महानवमी!
कांगेसको विरोध हुँदा-हुँदै राष्ट्रियसभाबाट पनि पारित भयो चिकित्सा शिक्षा विधेयक !
नेपाल बैंकमा जागिरको अवसर: यी ९ जिल्लाका लागि कर्मचारी माग (विज्ञापनसहित)
भैँसी सुन्दरी प्रतियोगिता सम्पन्न ! विजेता भैँसीका धनीले पाए २५ , १५ हजार र १० हजार रुपैया !